PC Design Creator - Metro IT & Japanese Language Centre
Design ဟုခေါ်သော နည်းပညာ
Design ကိုလေ့လာခြင်းနှင့် Design Applications တွေ အသုံးပြုခြင်းတွေကို လေ့လာခြင်းဆိုတဲ့ ပညာရပ်ကို ရောထွေးနေပါသလား? Design ဆိုတာ သင်ကြားရုံနှင့် မတတ်မြောက်ဘဲ အနုပညာစိတ်ကူးစိတ်သန်းရှိတဲ့ လူပဲလုပ်နိုင်တယ်လို့ ထင်မြင်မိပါသလား? အဲဒါက အလွန်လွဲမှားနေတဲ့ အယူအဆပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အရောင်ရွေးချယ်မှု၊ စာလုံးအနေအထား၊ နေရာအယူအဆ အစရှိသဖြင့် အားလုံးမှာ သက်မှတ်ချက် ပုံသေနည်းရှိပြီး ဒီပညာကို လေ့လာပါက မည်သူမဆို အကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းတွေကို ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Metro မှာ ဒီဇိုင်းဘာသာရပ်ကို လေ့လာပြီး အရည်အချင်းပြည့်မှီတဲ့ Designer ကောင်းအဖြစ် ရပ်တည်ချင်ပါသလား?
ITPEC IT Passport ( IP ) အောင်လက်မှတ်က PC ကို အသုံးပြုပြီး အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော ဝန်ထမ်းတိုင်း ဖြေဆိုသင့်တဲ့စာမေးပွဲဖြစ်ပါတယ်။ File size တွေ Data သိမ်းပုံသိမ်းနည်းတွေ၊ Internet နှင့် ပတ်သက်သော လုပ်ဆောင်ပုံ၊ Security ပိုင်းဆိုင်ရာ အစရှိသဖြင့် IT နှင့် ပတ်သက်သော ဗဟုသုတတွေကို လေ့လာရပါမယ်။
Web က နေရာ၊ အချိန်နှင့်မဆိုင်ဘဲ မည်သူမဆို ကြည်ရှုနိုင်တဲ့အရာဖြစ်ပြီး ယခုအချိန်မှာ ပုံနှိပ်ကြော်ငြာများနှင့်အတူတူ အောင်မြင်တဲ့ ကြော်ငြာနည်းလမ်းတစ်မျိုးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇိုင်းတွေကို လေ့လာပြီး HTML CSS စတဲ့ Web Application တွေကို သင်ကြားပြီး Web Designer တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ပါတယ်။
Animations ဖန်တီးခြင်းမှ အစပြု၍ စက်မှုလုပ်ငန်းတွေအထိ အသုံးပြုနေသော ဒီဇိုင်းများကတော့ 3D Graphics များဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို အနုပညာဒီဇိုင်းပညာရပ်တွေကို Metro ကျောင်းမှာ လေ့လာသင်ယူနိုင်ပါသည်။
စာသင်နှစ် ဒုတိယနှစ်မှာတော့ Project ပြုလုပ်ရပြီး ဂျပန်နိုင်ငံရှိ MBC College မှ ဒီဇိုင်းဆရာများက အမှတ်များကို ဆုံးဖြတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာတစ်နိုင်ငံတည်းသာမကဘဲ ကမ္ဘာက အသိအမှတ်ပြုတဲ့ ဒီဇိုင်းလက်ရာများကို ဖန်တီးနိုင်ရန် ယခုအချိန်က အခွင့်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်။
Metro Computer Myanmar Co.,Ltd Metro General Business College Metro Computer Service Metro Book Shop Facebook
System Creator PC Design Creator Business IT Engineer Study in Japan ဂျပန်စာသင်တန်း ကုမ္ပဏီအကြောင်း ဆက်သွယ်ရန်